KwiFulfilPanda, eyona nto iphambili sijolise kuyo ekuqinisekiseni ukuba abantu abaphatha ukufunwa, ukuveliswa, ukuthunyelwa, kunye nokuzaliseka kwabo basebenza ngokufanelekileyo. Ngonxibelelwano lwehlabathi, siya kuba nakho ukukunceda ufumane, ukhethe kwaye ulawule ababoneleli ukuzisa imveliso yakho kwintengiso.
Inkqubo yokukhangela evela e-China
Ubuncinci bezinto ezintathu ezitywiniweyo ezibhaliweyo ezivela kubanikezeli abohlukeneyo ziya kunikwa wena. Ukuphambuka kobungakanani, ukugqibezela umda / iimpembelelo, izinto ezifanayo zasekhaya ezizezinye, njl.njl.
Xa imveliso iqala, senza ngaphakathi-kwinkqubo yokuhlola ukugxininisa kunye nokuqinisekisa ukuphuculwa emva koko iodolo iya kubekwa egameni lakho kwinkampani ngelixa sisenza isicelo semigaqo nemiqathango.
I-odolo iphela iya kubekwa esweni ngexesha lenkqubo kwaye iya kuhlola iimpahla zakho ngaphambi kokuba zithunyelwe ukuqinisekisa ukuba zikwimeko efanelekileyo.
Ihanjiswe kwindawo yakho
Siza kujongana nezinto ezisetyenziswayo kuwe ukuba ngaba ukhetha ukuba iimpahla zakho zithunyelwe kwigumbi lakho lokugcina impahla laseAmazon, Shopify, okanye emnyango. Kanye ngexesha lokuba uyifuna nini, iimpahla ziyafika.
Ukuba ufuna ukubonelelwa ngeempendulo zemibuzo yakho, ungasifumana nanini na. Ngamana kungangokunxulumene neemfuno zakho singavuya sithande ukunxibelelana nawe ukuseka intsebenziswano elungileyo.
Apha eFulfilPanda, sikuxabisile.